Akụkọ Bible: Ezi Nwa na Ajọ Nwa - Ebe Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n’Ịntanet
LEENỤ Ken na Ebel ugbu a. Ha abụọ etoola. Ken bụ onye ọrụ ubi. Ọ na-akụ ihe ọkụkụ na mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri dị iche iche.
Ebel ghọrọ onye na-azụ atụrụ. O nwere mmasị n’ilekọta ụmụ atụrụ. Ha na-eto ghọọ atụrụ buru ibu. Ọ dịghị anya Ebel enwee ìgwè atụrụ nke ọ na-elekọta.
Otu ụbọchị, Ken na Ebel nyere Chineke onyinye. Ken nyere ihe oriri ọ kọtara n’ubi. Ebel nyere atụrụ kasị mma o nwere. Omume Ebel na onyinye o nyere dị Jehova mma. Ma omume Ken na onyinye o nyere adịghị Jehova mma. Ị̀ ma ihe kpatara ya?
Ọ bụghị nnọọ na onyinye Ebel ka nke Ken mma. Ọ bụ n’ihi na Ebel bụ ezigbo mmadụ. Ọ hụrụ Jehova na nwanne ya n’anya. Ma Ken dị njọ; ọ hụghị nwanne ya n’anya.
Chineke gwara Ken ka ọ gbanwee àgwà ya. Ken aṅaghị ntị. O were nnọọ iwe na Chineke hụrụ Ebel n’anya karịa ya. N’ihi ya, Ken wee sị Ebel, ‘Ka anyị gaa n’ọhịa.’ Mgbe naanị ha nọ n’ebe ahụ, Ken wee malite iti Ebel ihe. O tisiri ya ihe ike wee tigbuo ya. Ọ́ bụghị ihe jọgburu onwe ya ka Ken mere?
Ọ bụ ezie na Ebel nwụrụ, Chineke ka na-echeta ya. Ebel bụ ezigbo mmadụ, Jehova adịghịkwa echezọ onye dị ka ya. Otu ụbọchị, Jehova Chineke ga-eme ka Ebel dịghachi ndụ. N’oge ahụ, Ebel agaghị anwụkwa ọzọ. Ọ ga-enwe ike ibi n’ụwa ebe a ruo mgbe ebighị ebi. Ọ́ gaghị adị mma ịmata ụdị mmadụ ndị dị ka Ebel?
Mmadụ ndị dị ka Ken adịghị amasị Chineke. Mgbe Ken gbusịrị nwanne ya, Chineke nyere ya ahụhụ site n’isi n’etiti ndị ezinụlọ ya chụga ya ebe dị anya. Mgbe Ken jere ibi n’akụkụ ọzọ nke ụwa, ọ kpọọrọ otu n’ime ụmụnne ya ndị inyom ka ọ bụrụ nwunye ya.
Mgbe oge na-aga, Ken na nwunye ya mụrụ ụmụ. Ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nke Adam na Iv lụkwara di na nwunye, wee mụtakwa ụmụ. N’oge na-adịghị anya, a bịara nwee ọtụtụ mmadụ n’ụwa. Ka anyị mụọ ihe banyere ụfọdụ n’ime ha.
Jenesis 4:2-26; 1 Jọn 3:11, 12; Jọn 11:25.
Gịnị bụ ọrụ Ken na Ebel?
Onyinye ndị dị aṅaa ka Ken na Ebel wetaara Jehova?
N’ihi gịnị ka onyinye Ebel ji masị Jehova, gịnịkwa mere nke Ken amasịghị ya?
Olee ụdị mmadụ Ken bụ, oleekwa otú Jehova si nwaa ịgbazi ya?
Gịnị ka Ken mere mgbe naanị ya na nwanne ya nwoke nọ n’ọhịa?
Kọwaa ihe mere Ken mgbe ọ gbusịrị nwanne ya.
Gụọ Jenesis 4:2-26.
Olee otú Jehova si kọwaa ọnọdụ dị ize ndụ nke Ken nọ na ya? (Jen. 4:7)
Olee otú Ken si gosipụta ihe dị ya n’obi? (Jen. 4:9)
Olee otú Jehova si ele ịkwafu ọbara onye aka ya dị ọcha anya? (Jen. 4:10; Aịsa. 26:21)
Gụọ 1 Jọn 3:11, 12.
N’ihi gịnị ka Ken ji wee iwe dị ukwuu, oleekwa otú nke a si bụrụ ihe ịdọ aka ná ntị nye anyị taa? (Jen. 4:4, 5; Ilu 14:30; 28:22)
Olee otú Bible si gosi na ọbụna mgbe ndị ezinụlọ anyị niile na-emegide Jehova, anyị ka pụrụ ịnọgide na-eguzosi ike n’ezi ihe? (Ọma 27:10; Mat. 10:21, 22)
Gụọ Jọn 11:25.
Nkwa dị aṅaa ka Jehova na-ekwe banyere ndị niile nwụrụ n’ihi ezi omume? (Jọn 5:24)